Caano carruur oo caan ah oo la ogaaday in ay sumaysan yihiin – Banaadir weyne
11 Disheember, 2017
Shirkadda Faransiiska laga leeyahay ee Lactalis ee samaysa caanaha carruurta ayaa amartay in dib loogu soo celiyo caanaha ay soo saareen meeshay doonaanba caalamka haka yaalaan ee, iyaga oo ka cabsi qaba in ay ku jirto bakteeriyada wax qudhmisa ee salmonella.
Wasaaradda caafimaadka ee Faransiiska ayaa sheegay in ay 26 carruur ah oo dalkaas ku nool ay xannuunsadeen horraantii bishii Disembar.
Dib u soo celinta ayaa saamayn doonta caanaha loo suuq geeyay Britain, Shiinaha, Pakistan, Bangladesh iyo Suudaan.
Waxay saamaynaysaa boqolaal caano daqiiq ah oo dunida loo suuq geeyo iyagoo kala ah noocyada Milumel, Picot iyo Celi.
Lactalis waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waawayn dunida ee caanaha soo saara.
Michel Nalet oo ah afhayeen u hadlay shirkadda ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in ku dhawaad 7,000 oo tan oo wax soo saarkooda ah ay wasakhoobeen, laakiin shirkaddu aysan wali awoodin in ay sheegto inta la isticmaalay ama xaddiga wali suuqyada yaalla.
Lo’ diyaarado loogu daabulay Qadar
Lix carruur ah ayaa dhimatay 300,000 oo kalana way xannuun sadeen ka dib markii shirkad Shiinaha laga leeyahay ay kiimikooyin ku dartay caanihii carruurta ee ay soo saaraysay. – BBC Somali
Goobaha Ganacsiga Degmada Guriceel oo maanta xiran
Muuse Biixi oo hadlay kadib guushiisa doorashada
Daawo Sawirada: Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay Siinka Dheer
Diblomaasiyiin Soomaaliyeed oo tababbar loogu soo gabo gabeeyay Dalka Qatar “SAWIRRO”
Murashixiinta Madaxweyne Waxaa Kusoo Biiray Wasiir Koowaadkii Hore Ee Dowladda Soomaaliya (Daawo Sawirada)
Jowhar Waxaa Usoo Wareegay Diyaaradihii Qaadka Geyn Jiray Muqdisho
Galmudug Oo Baaq U Dirtay Hay’adaha Samafalka